2019 #NABShow: #GALSNGEAR လက်ရှိ NAB ဇယား! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: #GALSNGEAR လက်ရှိ NAB ဇယား!
2019 #NABShow: #GALSNGEAR လက်ရှိ NAB ဇယား!
#GALSNGEAR၏တစ်ဦးပဏာမခြေလှမ်း ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုများတွင်အမျိုးသမီးများ (WIFV), အ9၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် 10th မှတဆင့်ဧပြီ 2019th အပေါ်အများအပြားဖြစ်ရပ်များ hosting ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် Las Vegas မှာ။ #GALSNGEAR နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုအမြတ်ရရှိမှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်နေ၌အကြှနျုပျတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းဒါအရေးကြီးပါသည်။
"အမြိုးသမီးမြားကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ အတူ ပူးပေါင်း. NAB ပြရန်, #GALSNGEAR "ပြပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ, ပြားပေါ်နှင့်မီဒီယာရာတွင်အပေါငျးတို့သနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလယ်ကွင်းကိုဖြတ်ပြီး, သူတို့တဲ၌မြင်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာဖြစ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တတ်၏ ဒါရိုက်တာ / ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကပြောပါတယ် #GALSNGEAR တည်ထောင်သူမေီ DeLouise ။
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 9:
8: 30 -9နံနက် - နေဖြင့်တည်ခင်းဧည်ဟာ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၏ဗဟို Lobby ထဲမှာ Networking ကော်ဖီ Blackmagic ဒီဇိုင်း.
9 - 10 နံနက် - Panel ကိုဆှေးနှေးမှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဆန္ဒပြပွဲများ "ပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်NAB ပြရန် LIVE ။ "ဒီအသံလွှင့်လူအစုအဝေးတီဗီတည်ထောင်သူ Adryenn အက်ရှလေနဲ့ Amy DeLouise အားဖြင့်ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည်။
2 -4ညနေ - အမန်ဒီကွန်ယက်တဲ (SL14317) အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Blackmagic Ursa Mini ကို Pro ကို၏ဆန္ဒပြ။ အဆိုပါမန်ဒီကွန်ယက်, B, & H- အဆိုပါစတူဒီယိုကပူးတွဲကမကထနှင့် Blackmagic ဒီဇိုင်း.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10:
10: 30 - 11: 20 နံနက် - "နယူးကဘာလဲ, Post ကိုအတွက် Next ကိုကဘာလဲ"- တိုင်နည်းပညာများနှင့် Workflows အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. Panel ကိုဆှေးနှေးရနျ။ သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်: ထုတ်လုပ်သူ, စာရေးဆရာနဲ့လုပ်ငန်းရှင် Darley Newman က; Ott အိမ်အသံ Cheryl Ottenritter, ငါးတစျခုမှာအရောင်တည်ထောင်သူနှင့်အကြီးတန်း Colorist Alin Sinquin ၏အကြီးတန်းရောနှောနှင့်တည်ထောင်သူ; နဲ့ Amy DeLouise ။
2 - 3: 15 ညနေ - "VR အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး: action အတွက်ဖန်တီးရှင်များ"(တစ် Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား session တစ်ခု) - သစ်ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့် virtual reality ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရရှိနိုင် tools များနှင့်ပတ်သက်ပြီး Panel ကိုဆှေးနှေးရနျ။ သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်: Immersionn တည်ထောင်သူအလက်ဇန္ Hussenot; နှစ်ဦးက Bit ဆပ်ကပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို Creative အရာရှိချုပ်နန်စီ Bennett က; Palm Beach တွင်အတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ် Danilda Martinez မှာ Datzi မီဒီယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်နည်းပြ; Metastage CEO ဖြစ်သူ Christina Heller; နဲ့ Amy DeLouise ။
6 - 8 ညနေ - Dolby ကကမကထပြုဖိတ်ကြားသာကော့တေးဧည့်ခံခြင်း, Blackmagic ဒီဇိုင်း.
"ကျနော်တို့ကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် #GALSNGEAR ပြားများနှင့်ကွန်ရက်ဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းပါပြီ NAB ပြရန်" WIFV နိုင်ငံတော်သမ္မတရော်ဘင်လမ်းပြ Noonan-စျေးကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်မီဒီယာနည်းပညာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များမှာ, စားပွဲမှာနေရာ, နှင့်မြင်သာတဦးတည်းရှိသေချာစေရန်ဖြစ်၏။ "
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် #GalsNGear မှာအဖြစ်အပျက် NAB ပြရန် အောင်မြင်စွာတက်ရောက်ရာပေါင်းများစွာအဖြစ်, ထိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး on "ဆွဲငင်NAB ပြရန် "အသံလွှင့်ဖြင့်ထုတ်လုပ် Live မဂ္ဂဇင်း ပို. ပင်ကြည့်ရှုဖမ်းမိ Beat ။ ထို့အပြင်ယင်း #GalsNGear hashtag ရုံသုံးရက်တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါရှစ်သန်းတွေ့ကြုံကျော်ရရှိခဲ့! nice အလုပ်, Gals!
"ဒီ #GalsNGear ဖြစ်ရပ်များမှာ NAB ပြရန် "မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အဖိုးတန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲနေချိန်တွင်ချိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေး ကွန်ဗင်းရှင်း၏ NAB အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် Business Operations က Chris Brown ကပြောခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကိုတဖန်ဒီအဖိုးတန်နှင့်အားပေးပလက်ဖောင်းများကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော် & ဗီဒီယိုများတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ခံရဖို့အတှကျဝမျးသာပါတယ်။ "
အခမဲ့ NAB ပြရန် စာနယ်ဇင်းမှတ်ပုံတင်ရရှိနိုင် ဒီမှာ.
ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယို (WIFV) တွင်အမျိုးသမီးများနေ့နိုင်ငံ၏မြို့တော်အတွက် 501 (ဂ) (3) non-profit လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမျက်နှာပြင်-based မီဒီယာနှင့်ဆက်စပ်စည်းကမ်းအပေါငျးတို့သဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပညာရှင်များများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အောင်မြင်မှုတိုးတက်ထံအပ်နှံသည်။ WIFV ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်တာနေရှင်နယ် (WIFTI), ပိုပြီး 40 မီဒီယာပညာရှင်များထက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုယ်စားပြုနီးပါး 10,000 နေရာများတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး Affiliate ဖြစ်ပါတယ်။ အလည်အပတ် www.wifv.org.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-03-11
ယခင်: GatesAir: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @GatesAir @NABShow #NABShow
နောက်တစ်ခု: 1606 စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းအဖြစ် Vicky Sornsilp ဘုံဘိုင်